Ny herin'ny infografika: Nahoana izy ireo no manan-danja tokoa? | Famoronana an-tserasera
Ny herin'ny infografika: Nahoana izy ireo no manan-danja tokoa?
Ny infografika ho endrika mifandraika amin'ny haino aman-jery nomerika dia mijoro ho loharano mandaitra mahomby indrindra amin'ny fampitana vaovao amin'ny ambangovangony. Zava-misy io ary amin'ny maha endrika endrika iray azy dia nisy fiantraikany tamin'ny fananganana sy fampandrosoana ny atiny, fampitomboana ny kalitaon'ny sentetika sy minimalista. Androany isika dia mila endrika endrika sy endriny afaka manatanteraka ny asany amin'ny fahatsorana feno ary ambonin'ny hafainganana rehetra. Ny singa mifototra amin'ny hevitra, ny lahatsoratra, ny skotika ary ny manintona dia mahatonga azy io amin'ny lafiny iray ny parasyute an'ny haino aman-jery an-tsoratra izay toa nikatona talohan'ny fitomboan'ny haino aman-jery.
Mihetsika amin'ny tontolo nomerika isika, izay miovaova ary fiovana
amin'ny hafainganam-pandeha. Ny fifandraisana dia napetraka ho fototra vaovao ho an'ny haino aman-jery ary ny video dia lasa mpanjaka lehibe amin'ny Internet. Na dia izany aza ny endrika soratra dia afaka nifanaraka ihany koa amin'izao vanim-potoana hybridization izao amin'ny alàlan'ny fanovana ny endrika misy azy, ny fitsaboana azy ary ny tonika ary koa ny fampifangaroana mivantana amin'ireo endrika hafa.
Ny infographic dia teraka tamin'ny fiasa mazava, hanavao ny estetika sy misotro amin'ny herin'ny sary. Eto no misy ny famolavolana; izay iarahan'ny psikolojia, zava-kanto an-tsary ary ny fifandraisana mampitombo ny fahaizan'izy ireo ary mahasarika mpamaky maro.
Ny infografika dia mandaitra sy mahavariana satria manararaotra ny loharanon'ny zavakanto sary, psikolojia ary fiteny.
Saingy amin'ny lafiny fampiharana, maninona ny infographic no tsy mahazaka ny fiarahamonina mpamaky? Inona no tombony azony amin'ny fampielezan-kevitra dokam-barotra, mpampita vaovao na masoivohon'ny marketing na fifandraisana? Ireto misy antony tsara dimy tokony ho fantatry ny mpamorona sy ny mpamorona atiny rehetra.
1 Manamora ny olana sarotra ny infografika
2 Fahasamihafana sy sanda fanampiny
3 Fifandraisana ara-tsosialy
4 Hafainganana: ny vato fehizoro amin'ny paikady
5 Ilay mpamatsy tonga lafatra ho an'ny mpamorona atiny
Manamora ny olana sarotra ny infografika
Manomboka amin'ny fiasan'ny zavamiaina ka hatrany amin'ny lojika arahin'ny rafitry ny orinasa. Ny olana izay toa sarotra sy mitaky halava lava dia fintina amin'ny toerana kely. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo lahatsoratra misy sary dia mahasarika ny saina izahay hametraka indray ny lojika raha atao indray mipi-maso manamora ny famolavolana ireo fotokevitra.
Fahasamihafana sy sanda fanampiny
Ny mpamaky dia lasa zatra mandany vaovao manaraka ny firafitra sy ny fandaminana nentin-drazana. Lahatsoratra be dia be miaraka amina fampahalalana sarotra kokoa na vitsy, fa raha fintinina dia mitaky fotoana sy fahavoazana izy ireo. Saingy, ny infografika dia tapaka miaraka amin'ny fizotrany manontolo ary amin'ny fomba ahoana dia miditra amin'ny mpamaky amin'ny alàlan'ny herin'ny hafatra hita maso. Ny olon-tsika, na maniry izy ireo na tsia, dia handray ny fampahalalana sy ny hafatra resahina ary amin'ny fomba tena mailamailaka. Jery ​​tokana dia ampy Jery ​​iray ary efa nosamborinay ny sain'ny mpampiasa.
Na tiantsika izany na tsia, misy sokajy atiny iray izay, rehefa laniny, dia mamaritra ny toetran'ny mpampiasa ary manana refy ara-tsosialy. Ny karazana atiny zarainay sy ampidirinay amin'ny bio anay manokana amin'ny fomba mamaritra ny maha-izy antsika. Ny infografika dia mamela anao hizara atiny marobe amin'ireo sehatra mifandraika amin'ny maha mpiara-miasa anao asa
na kilasy. Manana ny fahaizana manamafy ny fizotry ny fifanakalozana ary manatsara ny maha-izy azy manokana ny mpamaky (na tsia), noho izany dia ho fanentanana ho an'ireo mpampiasa anay hanapa-kevitra ny hizara izany mavitrika.
Hafainganana: ny vato fehizoro amin'ny paikady
Ny hafainganam-pandeha angamba no antony lehibe indrindra manazava ny fahombiazan'ny infografika ho loharanom-pifandraisana. Satria satria manelingelina haingana ny fizotry ny famakiana amin'ny tambajotra sosialy rehetra izany, dia afaka mahazo mpamaky maro be ao anatin'ny fotoana fohy. Io dingana io dia mahery vaika tahaka azy foana
ary amin'ny fotoana anoratana azy dia mahatratra ny ampahany amin'ny mpanaraka mizara ny atiny, toy izany koa ny fomba miverimberina rehefa mamaky ity fizarana ity ny mpamaky hafa ary mizara indray, manome fahitana bebe kokoa an'ilay tranonkala na lahatsoratra resahina. Ankoatr'izay, izy koa dia mifanaraka tanteraka amin'ny fomba fiainana ankehitriny. Ny mpampiasa anay, na mandeha amin'ny alàlan'ny metro izy na efa hiditra an-dakilasy, dia handray ny hafatra ary Raha mahazo fitsaboana sahaza sy mamaky tany ity hafatra ity dia hahomby ny fizarana.
Ilay mpamatsy tonga lafatra ho an'ny mpamorona atiny
Matetika ny mpamorona atiny dia mila manazava ny lohahevitra atrehin'izy ireo noho ny antony mahomby (ary mazava ho azy ny fahitana). Ny mpanoratra iray anio dia mila manana infografika sy loharanom-pahalalana marobe, na dia amin'ny ankapobeny dia voafetra ho an'ny mpamorona sary fotsiny io asa io ary amin'izany fomba izany no hamoronana atiny avo lenta sy fahombiazana mety hitranga. Androany dia lasa ilaina izany manana fanohanana eo amin'ny ambaratonga ambadika (atiny) ary karazana sary hafa (tsy latsa-danja). Ilaina ny fampahalalana momba ny kalitao, mora levonina ary manintona.
Izy ireo dia tsy isalasalana fa antony lehibe tokony hamerenana amin'ny laoniny ny fampiasana an'io fitaovana tsara tarehy io raha mbola tsy nanao izany isika. Hanolotra sosokevitra tsy ho ela izahay fonosana loharano ho an'ny mpamorona hanamora ny asa izany ary tena hahasoa anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ny herin'ny infografika: Nahoana izy ireo no manan-danja tokoa?
Esther carulla dia hoy izy:
Valio amin'i Esther Carulla
Manadihady ny 365psd izahay, tranokala misy loharanom-bola an-tserasera maimaimpoana